China CHAIN ​​SLINGS Soosaarayaasha iyo Bixiyaasha | Chenli
Khibrad gaar ah oo wax soo saar, habka wax soo iibsiga, ku xir howlahaaga tayada leh
▲ Silsiladaha xoogga sare ee Chenli, waxaan soo saari karnaa silsilad welded, kor u qaadis ah (silsilad) silsilad, silsilad miino, silsilad xayawaanka, silsiladda magdhowga saqafka, silsilada taayirrada iyo silsilada caagga ah ee caagga ah iyo ku dhawaad ​​300 nooc, kuwaas oo si ballaaran loogu adeegsaday ujeeddo kala duwan sida wiishashka, xarkaha , goynta, xirida, miinada, jardiinka iwm.
▲ Silsilada silsiladan waxay ka kooban tahay gundhigga 'Master Master', isku xirka isku xirka, silsiladaha iyo xirxirayaasha dhamaadka.
▲ Dhererka waxaa lagu sameyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
▲ Waad dooran kartaa nooc kasta oo qabatooyin ah sida ku xusan mashruuca kor loo qaaday.
▲ haad kor u qaadidda xagalku kama sarraynayso 60 °.
▲ Halbeeg nabadgelyo leh: 4: 1. Waxaan sidoo kale soo saari karnaa SF: 5: 1 & 6: 1.
▲ Sababta nabdoon: min 4 jeer
▲ Calaamadeynta Badeecada: G80 ama uu u baahan yahay macmiilku.Waxaan sidoo kale sameyn karnaa silsilad aan caadi aheyn oo waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
▲ Chenli waxay soo saartaa noocyo silsilado ah, kuwaas oo ka samaysan bir-karbo alloy-hooseeya. Waxay leeyihiin astaamo haddii anti-saameynta, awoodda culeyska sareeya, ductility, elongation.
▲ Chenli G80chain wuxuu la kulmayaa DIN5687, DIN5688, heerka Jarmalka, ISO3076. Waxaan ka shaqeyn karnaa dusha sare iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
▲ Chenli G80 silsilad xoog badan, jabin xoog leh800MPA.
Silsiladaha qafisyada waxaa loo isticmaalaa in lagu duubo oo loogu wareejiyo walxaha si badbaado iyo hufnaan leh. Dhamaan silsiladaheena labadaba G80 & G100 waxay ka samaysan yihiin bir aad u sareeya oo la demiyey loona qaboojiyey nabadgelyo dheeri ah.
Waxaad dooran kartaa silsiladda qaadista saxda ah ee loo baahan yahay si aad u buuxiso shuruudahaaga gaarka ah. Waxaan bixinaa hal, laba, saddex iyo afar silsiladood oo lug ah oo dhererkoodu yahay min hal ilaa 10 mitir, halka silsilad walbana ay ka dhexeyso 6mm ilaa 32mm balac dhumuc leh. Waxaad si dheeraad ah u habayn kartaa silsiladahaaga kor u qaadista adoo ku daraya mid ka mid ah xargaha ballaaran ee xargaha iyo yaraynta xajiyeyaasha.
Labada silsiladeena iyo qaybaha silsiladeena labadaba waxaa laga sameeyay fasalka 80 ee birta-kuleylka kuleylka lagu daweeyey ee si buuxda loo tijaabiyey loona xaqiijiyay. 80 bir ah oo bir ah ayaa si gaar ah loogu habeeyay codsiyada kor u qaadida dusha sare.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan qaadista silsiladaha markaa fadlan la xiriir kooxda khibradda leh.
SOO SAARIDDA DHAQAALAHA
▲Chenli waxay soo saartaa noocyo silsilado ah, kuwaas oo ka samaysan bir-karbo alloy-hooseeya. Waxay leeyihiin astaamo haddii anti-saameynta, awoodda culeyska sareeya, ductility, elongation.
▲Chenli G80chain wuxuu la kulmayaa DIN5687, DIN5688, heerka Jarmalka, ISO3076. Waxaan ka shaqeyn karnaa dusha sare iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
▲Chenli G80 silsilad xoog badan, jabin xoog leh800MPA.
XARUNTA DHAQANKA & DABKA DABKA
Hore: HORIZONTAL BIXIYAHA CLAMPS PDB TYPE
Xiga: GUDBINTA CIIDAMADA HAGAHA
2 Qalinleyda loo yaqaan 'Tonne Chain Block'
Silsiladda Lugaha Madoow
Buugga Tilmaanta Silsiladda
Chain Block shaqeynaya
Muranka silsilada Fasaxa
Silsiladaha iyo Xarkaha
Clevis Hooks Si Loo Dhiibto
Sine silsiladda silsiladaha
Qaadida silsiladaha iyo Xargaha
GUDBINTA CIIDAMADA HAGAHA
EN818 GUDBINTA CUDURKA